The kasị mma Android egwuregwu nke 2015 - News Ọchịchị
The kasị mma Android egwuregwu nke 2015
Si Vainglory na-akwacha ka Lara Croft Go, Alphabear na Minecraft: Akụkọ nke mode, na 25 kasị mma egwuregwu n'ihi na Android nke afọ
Isiokwu a na-akpọ “The kasị mma Android egwuregwu nke 2015” e dere site Stuart Dredge, n'ihi na theguardian.com on Thursday 24th December 2015 08.00 UTC
O ruru otu mgbe, Android mgbe na-egwuri abụọ omume ugha ka iOS mgbe ọ bịara ọhụrụ na kasị ukwuu egwuregwu. Na nke ahụ ogologo arahụ ezie na: 2014 bụ ahụkebe afọ maka Android Ịgba Cha Cha, ma 2015 bụ nnọọ dị ka ihe ọma.
Si platformers na mgbaghoju anya egwuregwu gbaa 'em acha ọkụ na ọbụna hardcore MOBA (ọtụtụ mmadụ online agha arena) utu aha, Android nwe nwere ọtụtụ ịhọrọ site na. A bụ anyị roundup nke 25 kasị mma utu aha, na ihe na-atụ aro na ihe ngalaba.
Ọ bụrụ na iOS bụ gị mobile Ịgba Cha Cha n'elu ikpo okwu nke oke, e nwere ihe a iche iche 2015 roundup n'ihi na, nke ị nwere ike ịhụ ebe a.
25. -Ebibi Light - Steven Universe RPG
Dabere na Eserese na-atọ Network show Steven Universe, a na-anọchi na ya kpọkwara dị ka a na-deere RPG - ọ bụ ezie na Fans nke show ga-enwe akomako ya nkedo. E nwere ihe ọtụtụ inyocha na-enweghị ya mgbe mmetụta dị ukwuu, mgbe agha na-arụzi ụgbọala bụ dị nnọọ mma maka touchscreen.
Ọzọ n'elu ikpo okwu egwuregwu na ihe a siri ike afọ n'ihi na nke a genre on mobile. Nke a bụ a pixel-zuru okè egwuregwu e mere na-egwuri dị ka ngwa ngwa ma ọ bụ dị ka nke ọma dị ka na-amasị gị, na nza nke nzuzo inyocha ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ nke ikpeazụ. nkwafu njikwa, mma-emejuputa atumatu njikwa na ụfọdụ dị enweghị isi na ekike ga-etinye a ọnụ ọchị na ihu gị.
23. PewDiePie: Mgbe Ochie nke Brofist
22. The Trace: Igbu ọchụ Mystery Game
Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya a whodunnit mpụ akwụkwọ, The Trace bụ kasị jiri ya na mobile na-egwu egwuregwu ụdị. I nwere na-egwu tutuntu, -achọ clues, nyochasịrị egosi na wandering igbu ọchụ Mpaghara brooding (nhọrọ). Gịnị na-eme nke a nke mere fun bụ na storyline bụ na a pa na elu-edu TV mpụ nkiri.
21. Star Wars: Galaxy nke Heroes
Na iri 2015 o yiri ka eme ka a ọhụrụ Star Wars mobile egwuregwu, ha niile mma. Nke a bụ onye na Fans ga agụ anyị agụụ ọtụtụ: a ọma-e edinam egwuregwu onye mesiri ike na-achịkọta odide si dị iche iche eras nke Star Wars, na mgbe ahụ na-akpụ ha n'ime ìgwè ibu agha si n'eluigwe na ala.
Star Wars: Galaxy nke Heroes
20. ọchịchịrị ikwughachi
Anyị na hụrụ audio-na-egwu egwu dị ka Papa Sangre on smartphones tupu, ma nke a bụ dị iche iche, -eji "visualized dị mma" na-egosi ya gburugburu dabeere na ụda ị na-eme. Ma e wezụga ndị ụda na-adọta… ọma, anyị agaghị emebi ya. Ma nke a abụghị a egwuregwu ị ga chọrọ igwu naanị abalị - na ọ ga i jumping nke gị sofa.
19. ududo: Rite nke mabeghị Ọnwa
18. N'okpuru laithaus
Dị ka ọtụtụ a n'afọ iri na ụma-edinam egwuregwu dị ka a egwuregwu SIM, Stick nte 2 ka ị hoicking fours na isii isii megide a nso nke na-emegide, na n'ụzọ zuru okè yipụ-ala njikwa na silky-eji ire ụtọ na-aga aga. The kasị mma nte game on Android, ma ya arụzi kwesịrị ime ka o ịrịọ ọzọ ukporo Fans nakwa dị ka cricketing buffs.
Makwaara dị ka Android si Animal agafe, albeit na ihe na My Chemical Romance. Nke a nwere ị ụgbọ n'oké osimiri na usoro nke quests iji nyere aka wughachi n'obodo gị, na-arụ mgbidi a-akwọ ụgbọ, n'ịkụ azụ ma na-enyere si otu n'usoro nke na-agụ akụkọ. Dị ka ya n'ike mmụọ nsọ, ọ na-kwesịrị ruru eru na-adịghị achịkwaghị achịkwa kwa ụbọchị play.
Ọzọ egwuregwu na ga-enye gị mmetụta uche dị mma na-aga-ihe karịrị, nke a bụ a agha egwuregwu na-egwuri si n'ọnọdụ nke ndị nkịtị n'obodo a na ndị agha nọchibidoro. Ị ga-kewaa oge gị n'etiti ewu gị hideout na foraging na ize ndụ obodo n'okporo ámá, na ụfọdụ dị nnọọ ike mkpebi a ga-ama banyere ndị mmadụ n'okpuru gị nchedo.
Ọzọ egwuregwu na mikpuru onwe ya n'ihe ọhụrụ njikwa afọ a: n'okwu a, ịhazi ogwe nke ihe esere atọ ọchị akwụkwọ ịgbanwe ihe na-eme n'ime. a, esonyere mma n'anya visuals na a mkpịsị ụkwụ-na ịme ọpịpị Jazz soundtrack. A ụwa n'ebe ahụ iri na egwuregwu-atọ egwuregwu mgbagwoju anya, Gosikwa hụrụ a ụzọ ọhụrụ iji nwalee anyị wits.
Easily kasị mma Android egwuregwu nke afọ a na etinye aka pinging a okpokoro isi gburugburu n'elu ikpo okwu na-etoju site snapping n'oge ahụ ịkwụsị ya stretchy ụbụrụ. Ọ bụghị a mmadụ jupụtara genre, N'eziokwu. ma Skullduggery! bụ ihe na-echepụta ihe-puzzler, mezue na matriks-esque slowdown dị ka ị ịnyagharịa lawa (na nke) uko nkuku.
11. Shooty efegharị
Ma mara dị ka otu n'ime ihe ndị ahụ Crossy Road Mmepe mere ọzọ: e wezụga reinventing Pac-Man, ha mere ka a rapidfire gbaa 'em elu. Ọ na-eji yiri Ọnọdụ ka Crossy Road: ị ga-anwụ mgbe nile, ma ga Ị kpọghee ekwt ọhụrụ odide dị ka ị na-enwe ọganihu. Ọtụtụ amara, na-enye ume ọhụrụ unaggressive ya na-eji ngwa ịzụrụ.
10. Minecraft: Akụkọ nke mode
Vintage console franchise Rayman na-otu n'ime ndị kasị pụrụ ịtụkwasị obi mobile Ịgba Cha Cha brands kwa, na a usoro nke magburu onwe ya touchscreen utu aha. Rayman Adventures na-agbaji streak ọbụna na ya freemium Ọdịdị: yi-cartoonish n'elu ikpo okwu edinam na njikwa na mgbe imebi.
8. Oyi kpọnwụrụ Synapse Prime
E nwere nnọọ ole na ole ndị ọzọ na-eju afọ atụmatụ egwuregwu karịa Oyi kpọnwụrụ Synapse Prime on Android: ka na-eme n'ọdịnihu, ọ bụ a miri emi, ọgaranya n'aka dabeere na egwuregwu na-akawanye gị agbapụ na-akpụ akpụ gị site 40 ọzọ, -enyocha dị iche iche ụdịdị n'ụzọ. Ka ị na-egwu, ndị ọzọ nụchara anụcha gị si eme ga-aghọ.
Ọ pụrụ kpakpando a ma ama egwuregwu ihu, ma nke a adịghị lackluster atụ ogho-apụ. Lara Croft Go - dị ka Hitman Go tupu ya - bụ na a maara ika etinyere a nkume-siri ike puzzle-njem engine. Lara Croft Go-ewepụta na-elekwasị anya kpọmkwem na gị na ike iche echiche nka, na isii isi nke zuru okè-guzobere visuals inyocha.
A welcome n'ọdụ ụgbọ mmiri si iOS, a mobile MOBA game banye unu n'ụlọ otu dabeere agha na ndị ọzọ Player, na ọkụ na-adịgide adịgide gburugburu 20 nkeji na a oge online. Ọ bụ ihe na-eyi egwu genre maka newcomers, ma Vainglory eme ezigbo ọrụ na-eme ka ọ inweta Ka ịmalite ịkpọ.
Bụ nke a a egwuregwu, ma ọ bụ a ugbo-themed na-atụgharị uche ngwa? Nke ọ bụla, ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị mma na na na Android afọ a. Kọwara site na ya Mmepụta dị ka "a ịhụnanya leta osisi", ọ na-ahụ Ị na-azụlite gị na nwayọọ touchscreen swipes. The egwuregwu anya na-ada mara mma: na ngwọta gị mobile-igbe mbata nchegbu.
• The kasị mma Android egwuregwu nke 2014
• The kasị mma Android egwuregwu nke 2013
← The kasị mma iPhone na iPad egwuregwu nke 2015 The kasị mma iPhone na iPad ngwa ọdịnala nke 2015 →